ကျော်ခ| November 26, 2012 | Hits:739
9 | | အနှိပ်စက်ခံရသည့် အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် အိမ်အကူအလုပ်သမ မတင်နီလာအေး (ဓာတ်ပုံ – မိုးမခ)
ပေါင်းလောင်းဆည် စီမံကိန်း ရွာ ၂၀ ကျော် ပြောင်းရမည်
လက်ပတ်နီတွေ သတင်းထောက်ကို လိမ်ညာခေါ်ယူပြီး ရိုက်နှက်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment bo doe November 26, 2012 - 7:35 pm	alibarbar group.
ရန်ကုန် ဗဟန်းက မိန်းကလေးငယ် ရိုက်နှက်ခံရသည့် ဖြစ်ရပ် ရဲတပ်ဖွဲ့ စုံစမ်းနေ
မန္တလေး၌ အိမ်အကူ မိန်းကလေးအား ရိုက်နှက်နှိပ်စက်သည့် အိမ်ရှင်ကို အမှုဖွင့်အရေးယူ
အိမ်အကူအား နှိပ်စက်ပြီး တိမ်းရှောင်နေသည့် မော်ဒယ်လ် လင်မယားကို ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖမ်းမမိသေး
ကလေးငယ် ထောင်ချီ၍ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖမ်းဆီးခံထားရ
အကြောက် တရားနဲ့ ကလေးများ